Hadaaqa Dr. Gaboose ee Natiijadda Doorashaddu Ma Run baa Mise waa Riyo | Somaliland.Org
Hadaaqa Dr. Gaboose ee Natiijadda Doorashaddu Ma Run baa Mise waa Riyo
November 29, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)-Guddoomiyaha Urur siyaasadeedka UMMADDA Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, ayaa inshaaray in ururkiisu uu ku soo bixi doono kaalinta koowaad ee doorashada Goleyaasha deegaanka ee dalka ka dhacday maalintii shalay ee 28-kii bishan.
Dhawaaqa Dr. Gaboose ayaa rayul caamka bulshadu ka bixiyeen dareeno kala duwan. Iyadoo bulshadda qaarkood ay ku macneeyeen mid hor dhac ah oo hubsiimo la’aani ka muuqato.
Halka kuwo kalena ay ku fasireen bilowga barobagaando uu kaga sii afeefanayo haddii uu ururkiisu ka mid noqdo afarta urur ee ka siibanaya salaanka siyaasadda.
“Xogta aanu ka helayno tuullo iyo gobol walba rajada ah inaanu soo baxno mooyaane’ calaamadaha jira oo dhami waxay muujinayaan inaanu nahay ururka kaalinta koowaad galaya doorashadan,”ayuu ku tiraabay xalay Guddoomiyaha Urur siyaasadeedka UMMADDA Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo u waramayay Laanta Afsoomaaliga ee VOA-da.
Dr. Gaboose oo hadalkiisa sii watay wuxuu intaasi ku daray “ILAAHAY ayaanu ka rajaynaynaa inuu guusha na siiyo oo aanu baryeynaa, laakiin inta bani-aadamku arkayo ee daahirka ah ee dusha ah ee lagu arkayay ololayaashayadii baaxada lahaa.”
Nimcaan Cabdi Abokor oo ka mid ah bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa ka dareen celiyay hadalka Guddoomiyaha UMMADDA, waxaanu yidhi “Waxaan u fahmayaa hadalka Digtoorka laba mid uun inay tahay qeyb ka mid ah baro-bagaando uu ku faafinayo rayul caamka si haddii uu dhaco uu ugu doodo waa la igaga shubtay. Laakiin wali natiijo urur sii sheegan karaa inuu kaalinta koowaad ka galayo wali ma jirto, xiligeediina lamaba gaadhin. Waase la eegi doonaa waxa ka naaso-cadaada dhawaaqan Oday Gaboose oo rayul caamku mar walba ay ku darayaan inuu ka mid noqon doono ururka hadhaya.”
“Waa uun iska dagaal afka ah, waxaana ka socota goboladda iyo degmooyinka tirintii markaa kaalintan uu isgeeyay Dr. Gaboose waa uun mid uu doonayo inuu ku marin habaabiyo bulshadda Somaliland. Waxaana sanaaduuqda uga soo bixi doona wixii uu dadka gashaday,”ayuu yidhi Ibraahim Jaamac Nuur oo ka mid ah dadka sida dhow ula socda siyaasadda oo ka hadlayay hadalka ka soo yeedhay Dr. Gaboose.
Previous PostMasuuliyiinta Komishanku Maxay ka yidhaahdeen Tirinta Cod bixintii Doorashadda?Next PostKomishanka Oo Ka Warbixiyay Sanaaduuqdii Codbixinta Awdal Halkay Marayaan	Blog